Herisetra bevohoka ratsy
Miaraka amin'ny fahatarana amin'ny fadimbolana sy ny endrik'ireo famantarana voalohany amin'ny maha-bevohoka azy, vehivavy vehivavy iray mividy fitsapana. Ity dia fomba tsara sy haingana hampitoniana ny ahiahinao. Na izany aza, tsy mihoatra loatra ny hahafantarana raha hita fa bevohoka ny fitsirihana. Matetika dia mitranga izany fa azonao antoka ny amin'ny fahatanterahan'io fotoana io, saingy ny valin'ny fitsapana dia tsy manamarina izany. Misy antony maromaro amin'izany.
Ny fahatsapana ho an'ny bevohoka miaraka amin'ny fitsapana ratsy
Ny fitrangan'ny fadimbolana dia mety ho vokatry ny fitondrana vohoka. Maro ny antony mahatonga ny fiovan'ny ratra. Ireo no aretina fihinanan-trondro (ny fiteran'ny oviana ), fihinana matetika sy mahery, ny fahaketrahana sy ny fahaketrahana maharitra, ny fikolokoloana henjana, ary ny tsy fahombiazan'ny hormona ao amin'ny vatana. Na izany na tsy izany, raha toa ianao manana fahatarana, ary ny fitsirihana dia tsy maneho vohoka mandritra ny fotoana lava, ilaina ny mitsidika dokotera. Satria ny anton'ny fahatarana na ny fitsapana ratsy mandritra ny fitondrana vohoka dia matetika no mariky ny fahasalamana.
Ny antony mahatonga ny fitsapana ny vohoka
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia miankina amin'ny hatsarany sy ny fahamarinan'ny fampiharana ny valiny. Na izany aza, misy ireo antony hafa izay misy fiantraikany amin'ny famantarana. Tsy ny tsy fanarahan-dalànan'ny torolàlana ihany no azo atao, fa koa antony lehibe kokoa, ohatra ny fiovan'ny foetus. Andeha hojerentsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Ny fitsapana amin'ny fitondrana vohoka . Ny antony mahazatra indrindra mahatonga ny fitsaboana tsy mamaritra ny fitondrana vohoka dia ambany ny hCG ao amin'ny ra. Amin'ny ankapobeny, ny fitsapana dia afaka mampiseho valim-pahombiazana azo antoka raha tsy aorian'ny herinandro faharoan'ny fahaterahana. Ankoatr'izany, indraindray ny tsingerina dia mety tsy hahomby, ny fivalanana na ny fambolena ny atody. Ireo singa rehetra ireo dia misy fiantraikany amin'ny hCG. Noho izany, raha misalasala momba ny valin'ny fitsilihana ianao, andramo indray andro vitsivitsy, ary ampiasao ny fitsapana nataon'ilay mpamokatra iray hafa. Raha tsy niova ny valiny taorian'izany, dia mendrika ny hiverina amin'ny dokotera ary handray ny fitsapana.
Fampiasana tsy mety amin'ny fitsapana . Mba hahazoana vokatra azo antoka dia tsy maintsy mandalina amim-pitandremana ireo torolalana ianao ary manatanteraka ny fitsirihana araka ny torolalana. Raha tsy izany, dia azonao ny vokatra diso. Ankoatr'izany dia azo atao ny fitsapana tsy manara-drenirano ary raha tsy voatahiry izy dia efa tapitra ny vanim-potoan'ny vanim-potoana, na ny fitsapana dia tsy maharaka na tsy mety.
Maka fanafody . Azo atao ihany koa ny fanandramana fitsaboana ratsy raha ampiasaina ny diéretik na fanafody alohan'ny fitsapana. Ny fantsom-pahadiovana dia miteraka fihenan'ny hCG, raha vao mipoitra ny fitsapana dia tsara kokoa ny misedra fitsapana amin'ny maraina. Ankoatra izany, raha misotro ranoka be loatra ianao amin'ny takariva, dia mety ho ratsy ny fitsapana ny bevohoka na dia amin'ny maraina aza.
Ny fizotry ny pathologie amin'ny vatan'ny vehivavy . Raha misy vehivavy bevohoka manana aretina isan-karazany amin'ny taova anatiny, indrindra fa ny voa, dia afaka aseho koa ny fitsapana valiny ratsy. Izany dia noho ny fisian'ny aretina ny renisialy hCG amin'ny fandalinana ny urine dia mijanona ambany.
Pathology amin'ny fampandrosoana ny fitondrana vohoka . Misy tranga, rehefa mitohy isam-bolana ny fitondrana vohoka, ary ny vokatra dia maneho vokatra ratsy. Izany matetika no fitondrana vohoka. Ankoatra izany, ny vokatra diso iray dia azo jerena miaraka amin'ny fihanaky ny fivoaran'ny foetus, ny fitondrana vohoka , ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-jaza. Noho izany, raha miahiahy ianao fa nisy ny fiheverana, dia hitanao ny teboka iray amin'ny fitsirihana ny fitondrana vohoka. - mifandraisa amin'ny mpitsabo mpanampy avy hatrany.
Pigmented spots in pregnancy
Ahoana no hamaritra ny fitondrana vohoka?
Ny firafitry ny placenta tsy mifototra
Chlorid Sodium nandritra ny fitondrana vohoka
Herinandro 11 isaky ny fitondrana vohoka - vovobony
Nahoana no tsy afaka mihinana pastèque sy melon ny vehivavy bevohoka?
Fametahana pantyhose ho an'ny vehivavy bevohoka
Famantarana ny bevohoka any ectopic amin'ny voalohany
Inona no tsy azo atao mandritra ny fitondrana vohoka?
Azo atao ve ny mihinana voanio?
Zana nify nandritra ny fitondrana vohoka
Ny nahitan'i Paul Walker loza - tranga mampalahelo
Toerana tsara tarehy ao Saint-Petersburg
Fanatanjahantena mahaliana ho an'ny tanora
Fanamboarana voankazo mangatsiatsiaka
Vehivavy-Strelec, Male-Taurus - Fifandraisana
Ahoana no hamehezana ny fresco eo an-tananao?
Mofomamy mofomamy mafana
Virosy conjunctivitis - fitsaboana
Justin Timberlake sy Anna Kendrick